Mursal: Go'aan xun oo daruuf sababtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 25 november 2015 kl 14.12
"Waa go'aan mabaadiideena ka dhan ah oo xun"
Mursal Ismaaciil Ciise oo xiran dharkii hiddaha iyo dhaqanka ee reer Dalarna. Sawirle: Mursal Ismail Isa, kläd tula dräkten. Foto: Nils Gossas
Xisbiga Miljöpartiet ayaa ku tilmaamay go'aankii shalay xukumadda ku gaartay in xakameeyo xaqootiga waddanka soo gaaraya.
Xaduudaha waddanka oo aqoonsi lagu soo galo, sharciga magangeliyada oo kumeelgaar laga dhigo, dib u midowga qoysaska oo la xadido iyo dhalaanka kelinimada waddanka ku yimaada oo lagu sameeyo baritaan da’dooda dhabta ah. Waxyaabahas ayaa ka mid ah go’aanadii shalay xukumadda gaardhay oo wax looga qabanaya arrimaha socdaalka iyo qaabilaadda qaxootiga.
Xisiga Miljöpartiet ayaa xubin ka ah labada xisbi ee xukun wadaaga ah /Socialdemkraterna iyo Miljöpartiet) ee awooda dalka haya. Xisbiga cagaarka Miljpartiet oo lagu yaqaanay u hiilinta qaxootiga ayaa ku qasbanaaday in uu aqbalo go’aanadan ka dhanka ah mabaadiida siyasaadeed ee xisbiga.
Mursal Cise waa xubin ka mid ah golaha sare ee fulinta xisbiga Miljöpartiet. Asagoo Raadiyaha Sweden laanta af-soomaliga u warameyey waxuu yeri ”daruufta ayaa nagu kaliftay” in aan qaadano go’aanadan xun xun:
- Labadii billood ee ugu denbeysay waddanka waxaa soo gashay 80 000 oo qaxootiya. Maalin weliba waxaa imaanaysa caruur ka badan 400-500 oo qof oo aan xataa haddi hal iskuul oo weyn la dhiso uusan qaadin.
- Ujeedadeena waxa weeye, waddamo badan oo Yurubta kale ah habkoodii qaabilaada qaxootiga ayey adkeeyeen taas oo keentay in qaxootiga ku soo jabo waddamo kooban, sida Jarmalka Iyo Sween. Hadda waxaan rabnaa dadka in ay iska dhiibaan waddamada ee Yurub oo magangeliyo weydiistaan.
Mursal ayaa sheegay in golaha fulinta ee xisbiga Miljöpartiet aad uga doodeen go’aanka ayna wax badan ka baddeleen in aan la qaadan go’aankan.
- Waxaan ka saarnay qodob oranaya ku hadda dalka ku sugan in sharciga kumeelgaar ah la siiyo, taas waynu ka saarnay, waxaa ka mid ahaa qoysaska dib u midoobaya in aynan dib u midoobin laakiin waynu ka saarnay oo waxaan dhahnay ayaan xataa dhaqaalo lagu xirin markii ay qoysaskan midoobayaan, ayuu yeri Mursal Cise oo xubin ah golaha fulinta ee xisbiga Miljöpartiet.
- Waqti dheer bay nagu qaadatay wadohadalka in aan go’aan ku gaarno in aan dowladdana ka sii mdi ahaano dadkana siino qaabilad u qalanta sharaftoodam, cisigooda iyo bini’aadnimada.
onsdag 25 november 2015 kl 11.36
onsdag 25 november 2015 kl 12.53